အရေးယူပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမြင်ကို အမေရိကန် နားထောင်မည်
အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထားအမြင်များကို နားထောင်သွားမည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော် အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကားကာ အေအက်ဖ်ပီက ရေးသားထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ငွေစက္ကူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံကို ကုန်သွယ်မှု အခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အိုဘားမား စတင်ဆောင်ရွက်
မြန်မာနိုင်ငံကို GSP အခွင့်အရေးများ ပြန်ပေးသင့်သည်ဟု အိုဘားမားက ကွန်ဂရက်သို့ စာပို့
ဒီချုပ်အစိုးရ၏ စီးပွားရေး အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ယခုလ ချပြမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးအား အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ယခုလအတွင်း အများပြည်သူထံ ချပြမည်ဟု အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ပြောကြားသည်။ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပနေသည့် မြန်မာဂလိုဘယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွေးနွေးပွဲ (Myanmar Global Investment Forum) တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်.
စင်ကာပူကုမ္ပဏီများအကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေ
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေလိုကြသည့် စင်ကာပူကုမ္ပဏီအကြားတွင် ရေပန်းအစားဆုံးနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာသည်ဟု စင်ကာပူ စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က ပြောကြားသည်။ စင်ကာပူစီးပွားရေးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Mr S.S. Teo သည် အဖွဲ့ဝင် ၄၅ ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်.
အသွင်ပြောင်းကာလ ဆုံးရှုံးမှု(ဝါ) တိမ်းပါးခဲ့သူများအတွက် တရားမျှတမှု
ထိန်းသိမ်းထားစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားများ၏ ဆွေမျိုးများသည် ၎င်းတို့ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုမှု လိုအပ်လျက်ရှိကြသော်လည်း လက်ရှိအစိုးရက စိတ်ဝင်စားပုံ မပေါ်ပေ။
အောက်တိုဘာတွင် ALD(ANP) ပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ် ရွေးချယ်ဖွယ်ရှိ
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) မှ ခွဲထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (ALD) ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အစည်းအဝေးကို လာမည့် အောက်တိုဘာတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်သစ်ကိုလည်း ရွေးချယ်သွားဖွယ် ရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ရန် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဖိတ်ခေါ်
လန်ဒန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာမည့်နှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ရန် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်က ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံမည်
လန်ဒန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိသ ျှဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေနှင့် တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူကေသတင်းစာတစ်စောင်က ရေးသားထားသည်။